खेत खाने कोरोना - Candles Khabar
गृहपृष्ठ खेत खाने कोरोना
जीवनमा नसुनेका शब्द सुन्न थालेँ । लकडाउन, क्वारेन्टीन, आइसोलेसन, पीपीई …।
हनीले एक गिलास पानी दिएर भनी – प्रेसर बढ्यो कि ! औषधि छोड्नु भएको त थिएन नि ? सुगरको औषधि त बिहान खानुभएको थियो ।
मैले सोंचे – फ्ल्याट भाडा १६ हजार, बिजुली / पानी / नेट / फोनको ५ हजार, रासन १० हजार, मेरा महंगा औषधि ७ हजार, स्कुल खुलेपछि दुईजना केटाकेटीको फी १४ हजार ….अरू खर्च कतिकति !
उसले छक्क पर्दै सोधी – किन गाउँ जाने नि ? तपाईंको जागिर, मेरो पार्लर, केटाकेटीको स्कुल … ।
पछिल्लाे - आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ ३ गते
अघिल्लाे - नेकपा निर्णय-ओलीलाई ‘स्पष्टीकरण’, पौडेल ‘बर्खास्त’